काठमाडौँ, ६ असार । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले इन्धनको मूल्यवृद्धिको कारण सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । पटक–पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको आजक...
काठमाडौँ, ६ असार । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु भएलगत्तै नेकपा(एमाले)का सांसद पद्मा अर्यालले पेट्रोलपम्पमा स्टक राखेर मूल्यवृद्धि गरिँदा ठूलो आर्थिक लाभ हासिल भएको आरोप लगाएका छन् । हेर्दा साम...
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, पेट्रोल प्रतिलिटर १९९, डिजेल १९२ रुपैयाँ
काठमाडौं, ६ असार । नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको हो । निगमले गरेको मुल्यव...
चार दिनदेखि पेट्रोल अभाव
कर्णाली, ३१ जेठ । सुर्खेतमा शनिबारदेखि पेट्रोल अभाव भएको छ । सुर्खेतका पाँचवटा आयल स्टोरमा सोमबार अपराह्न २० हजार लिटर आपूर्ति भए पनि अझै सहज बनेको छैन । वीरेन्द्रनगरका शङ्खर, गङ्गाम...
काठमाडौं २० जेठ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको माग, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्य समायोजनबाट समग्र अर्थतन्त्रमा परेको...
काठमाडौं १८ जेठ । सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ । डिजेल र पेट्रोलमा लिटरमा १०/१० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।...
आयल निगम निजीकरणको प्रचार झुटो होः उद्योग मन्त्री बडू
काठमाडौं १३ जेठ । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्ने प्रचार गलत रहेको र शतप्रतिशत झुटो रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए । प्...
उपभोक्तालाई सहुलियत दिन अन्ततः पेट्रोलियम पदार्थको कर घट्ने
काठमाडौं १३ जेठ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लागाउदै आएको कर घट्ने भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर घटाउने र उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । ...
रुपन्देही १३ जेठ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा भलवारीस्थित नेपाल आयल निगमको क्षेत्रीय डिपोमा इन्धनले भरिएका दुईवटा टयांकरमा आगलागी भएको छ । रुपन्देहीको भलवारी स्थित नेपाल आयल निगमको प्रादे...
काठमाडौं १२ बैशाख । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले पेट्रोलियम पद्धार्थको विकल्प दिनुपर्र्ने र परम्परागत सीपमा ध्यान दिन सर...
सरकारले मूल्यवृद्धिको नकारात्मक कीर्तिमान कायम गर्‍यो : पूर्वप्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं १२ जेठ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले स्थानीय निर्वाचन लगतै पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बैशाख ३० गते भोट ख...
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, जनताको दैनिकी र सरकारको दृष्टि
काठमाडौं ११ जेठ । काठमाडौं जेठ । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको एक साता भित्रमा नै नेपाल आयल निगमले दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ । आइतबार निगमले एक विज्ञप्ती जारी गर...
पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु. १८० पुग्यो, अन्यको भाउ कति?
काठमाण्डौ, जेठ । नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले आइतबार मध्यरात १२ बजेदेखि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य बढाउँदा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु.१८० पुगेको ह...